Kuwa kale - Kooxda Zishan
Jiangsu Zishan Biological Co., Ltd. (NEEQ: 836539) waxaa la aasaasay 9-kii Maajo, 2012 waxaana aasaasay shirkadda Fujian Zishan Group Co., Ltd. oo ah shirkad muhiim u ah hormarinta ganacsiga warshadaha beeraha, mid ka mid ah tobanka shirkadood ee ugu waaweyn shirkadaha cunnada qasacadaysan ee Shiinaha, iyo shirkad muhiim u ah warshadaha cuntada qaranka. Abuuritaanka maalgashiga. Waa dhaqan in kooxda Zishan ay ka go’an tahay adeegsiga tikniyoolajiyadda casriga ah si loo horumariyo beeraha casriga ah. Shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto qalab casri ah oo caalami ah iyo tikniyoolajiyad si ay u dhisto Zishan Cunitaanka Mushroom Silicon Valley Industrial Park ee Shiinaha muddo 3-5 sano ah.
Mashruucu wuxuu ku yaal dhinaca galbeed ee Magaalada Sanhe, Degmada Hongze, Magaalada Huai'an, oo loo yaqaan "Pearl of Huaishang" iyo "Land of Fish and Bariis". Gaadiidku waa mid aad u habboon. Aaggu wuxuu leeyahay cimilo kala duwan sanadka oo dhan, oo leh roobab badan iyo celcelis ahaan heerkul sanadle ah 14 ° C. Sidoo kale waa mid hodan ku ah kheyraadka biyaha. Waxay wax ka yar 3 kiilomitir u jirtaa Lake Hong. Aaggu wuxuu leeyahay aag tayo sarre leh iyo bariis lagu beero 600,000 mu, iyo tirada sanadlaha ee digaagga oo dhasha in kabadan 15 milyan, caws qamadi tayo sare leh iyo digada digaaga ayaa siisa alaabta ceyriinka ah ee warshadda Agaricus bisporus. Shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay wadar ahaan 500 milyan oo yuan ku maal gasho 500 oo hektar oo dhul ah. Dhamaadka mashruuca, wax soo saarka sanadlaha ah ee Agaricus bisporus waa 35,000 tan, kaas oo soo saari kara 20,000 tan oo Agaricus bisporus ah oo qasacadaysan iyo boqoshaada cusbada leh. Dakhliga iibka wuxuu noqonayaa 500 milyan yuan, faa iidada iyo cashuurtuna waxay noqon doontaa 25 milyan yuan, 800 oo shaqo ayaa la siin doonaa, 2500 beeraleyna waxay noqon doonaan taajir
Mashruuca waxaa si xoogan u taageeray una daryeelay dawlada hoose, degmada, iyo gudiyada xisbiga ee magaalada iyo waaxaha dawlada. Wejiga xiga iyo wejiga labaad ee mashruuca waxay ku maalgeliyeen 150 milyan oo yuan 323 hektar oo dhul ah, waxayna dhisteen 15-tan oo ah heer-kul otomaatik ah oo lagu xakameeyo dhirta dhirta loo yaqaan 'bisporus mushroom beerta' 2 Waxaa jira 107 qol, 26 aagagga halsano ee hore iyo labaad wejiyada, iyo aqoon isweydaarsi likaha cusbo ah. Hal qol kuleyliyaha, hal xarun qeybinta awooda, hal aqoon isweydaarsi dhulka lagu sameeyo, hal bakhaar, iyo hal qol oo bakteeriyada lagu keydiyo. Hal qol oo wax lagu rito iyo qabow lagu keydiyo, hal xarun qaboojiye iyo kuleylineed. Wejiga labaad ee mashruuca waxaa la dhammaystiray bishii Sebtember 2015 oo si rasmi ah loo soo saaray wax soo saar. Mashruuca wajiga saddexaad ee jardiinada warshadaha wuxuu qorsheynayaa inuu dhowaan dhiso 3 khadadka wax soo saarka cuntada oo ay ku jiraan likaha bisporus iyo khadka soo saarida qasacadaysan, iyo in la dhiso guri cusub oo lagu beero boqoshaada 32,000 mitir murabac ah, kaas oo ka baaraandegi kara 15,000 tan oo ah likaha bisporus iyo cuntooyin kale. sanadkiiba. Ka dib marka mashruuca si buuxda loo dhammeeyo, waxaa la qiyaasayaa in wax-soo-saarka sanadlaha ah ee Agaricus bisporus uu yahay 35,000 tan, Agaricus bisporus qasacadaysan iyo 20,000 tan oo boqoshaada brine ah ayaa la soo saari karaa, 2,500 beeraley ahna taajir bay noqon doonaan. Waqtigan xaadirka ah, dhismaha guriga dhirta likaha ee wajiga seddexaad oo soo saaraya sanadle ah 4000 tan oo bisporus ah ayaa la bilaabay, iyo mashaariic qoto dheer oo wax soo saar ah sida boqoshaada qasacadaysan iyo casiir urursan ayaa sidoo kale socda.